Openshot: Mamorona fampisehoana an-tsary ny sarinay | Avy amin'ny Linux
vr_rv | | Tutorials / Manuals / Tips
Na satria te-hanao sarimihetsika (ho an'i Hollywood;)) na manakaiky ny tsingerintaona miaraka amin'ireto mpivady ireto izahay ary te-hanomana zavatra tsara ho azy ireo, na amin'ny fialamboly tsotra izao, dia mety te hanao fampisehoana an-tsary ny sarinay.
Con Openshot manana fitaovana tsara izahay hanatanterahana ilay asa. Na dia misy fitaovana natao mivantana hanatanterahana an'io karazana tetikasa io aza dia tsy misy mahatratra ny haavon'ny fanaingoana azo raisina miaraka amin'i Openshot.
Mamorona sary mihetsika miaraka amin'ny OpenShot
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manokatra ny programa (lafo be ny manao ilay asa rehefa nakatona ny programa). vantany vao nosokafana izahay dia manafatra ireo rakitra ilaina (sary sy feo)
Raha vantany vao azontsika ny zava-drehetra dia hiseho eo amin'ny kiheba ireto Project Files
Avy eo dia sintominay ireo sary, araka ny filahantsika izay tiantsika indrindra, mankany amin'ny bara etsy ambany, iray mifanila amin'ny iray hafa.
Raha vantany vao apetrakao amin'ny toerany ny sary rehetra dia manomboka manamboatra ny fampisehoana izahay. Miaraka amin'ny mpanondro totozy amin'ny sary iray dia tsindrio ny Ny bokotra ankavanan'ny totozy hanokatra ny menio manodidina
Ary amin'ny safidy an'ny mampirisika mifantina iray amin'ireo izay ananantsika izahay.
Averinay ity dingana ity amin'ny sary rehetra tianay hametrahana sary mihetsika. Aorian'ny dingana teo aloha dia mankany amin'ny vakizoro isika fiovana, izay toy ny lambam-baravarana azontsika ampiasaina eo anelanelan'ny sary iray sy ny iray hafa.
Misafidy ilay tadiavintsika izahay ary misintona azy eo ambonin'ny sary iray hanampiana ny lambam-baravarana.
Ary amin'ny Tetezamita izao dia tsindrio Ny bokotra ankavanan'ny totozy ary amboary ny fananany
Manova ny sandan'ny faharetan'izany isika.
Izay voalaza ao adiresy: ny dia ho an'ny rehefa eo am-piandohan'ny sary ary midina raha apetrany eo amin'ny faran'ny sary izany
Rehefa avy nahavita ny Tetezamita izao dia izao ny fotoana hanampiana hira miverina ho azy. Miverina amin'ny takelaka Project Files Safidintsika ny hira tadiavintsika (raha manana mihoatra ny iray isika) ary tarihintsika mankany amin'ny bara izay eo ambanin'ilay misy sary
Raha mihoatra ny faharetan'ny sary ny faharetan'ny hira, ny hataontsika dia ny mifantina ny fitaovana Hetezo.
Apetrakao eo amin'ny tsipika iray ihany ny kursor amin'ny faran'ny sary fa eo amin'ny tsipika fanaovana hira foana, dia tsindrio ny Bokotra havian'ny totozy
Manery izahay Ny bokotra ankavanan'ny totozy ny sombin-tsarimihetsika sisa tavela ary esory miaraka Esory Clip.
Mijery mialoha ny asanay izahay, raha misy zavatra tsy mety dia manery izahay Ctrl+Z hanafoanana ireo hetsika ataontsika tsirairay
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra, kitiho ny bokotra Export Video.
Manome anarana azy izahay, misafidy ny lahatahiry famoahana, manova ny masontsivana sasany arak'izay tiantsika ary safidio ny bokotra Export Video
Raha vantany vao vita ny fanondranana, dia ho afaka hankafizinay ny fanoloranay ny sary, Raketo an-tsoratra amin'ny Diska na ampidino amina fantsona Video.
Hatreto dia tonga izahay, manantena aho fa tianao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Openshot: Mamorona fampisehoana an-tsary ny sarinay
Mpampianatra tena tsara !! Misaotra betsaka anao nizara ny vaovao !!
fantatry tuto.si tsara momba ny openhot fa indray mandeha ihany no nampiasako azy satria nahazo zavatra tsy feno aho, (zatra marika na sarimihetsika na inona na inona) fa izao miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia hanomboka hamorona ny horonantsariko aho ... miarahaba
Izay notadiaviko ihany, misaotra! 🙂
Torohevitra sy fampianarana tena tsara ...
Tsy ho ela dia tena hahasoa izy 😉 ...
Nodetino dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny lahatsoratra!
Azonao ampidirina ve ilay horonan-tsary hijerena ny valiny? (Youtube?)
Valiny tamin'i Nodetino
Eny, raha aleon'ny mpanoratra dia vitany izany amin'ny http://10minutos.desdelinux.net
Hiezaka ny hampakatra azy aho.
saingy mampitandrina aho fa ohatra fotsiny no nataoko ary tsy dia niasa tsara.
Hitako tsara kokoa ity mpanonta horonantsary ity noho ny KDEnlive. Mety amin'ny biraoko XFCE.
XsebaRgento dia hoy izy:
Ny sarotra ataon'izy ireo dia tsotra sy matihanina. Misaotra betsaka noho ny fanazavanao tsara!
Mamaly an'i XsebaRgento
Anaia Flores placeholder image dia hoy izy:
Mila misintona an'ity programa ity aho, tsy haiko ny fomba hanaovana azy
Valiny tamin'i Anaia Flores
Farafaharatsiny mba tsy mahita kinova Windows amin'ny tranokalanao aho ..
Ny fametrahana dia sarotra. Azonao atao ve ny manazava azy amin'ny alàlan'ny fampianarana video anao.
Mafy? Tsia mihitsy. Miankina daholo izany raha mampiasa fizarana GNU / Linux ianao ary raha OpenShot dia ao amin'ny fitoeram-bokatra.
Juan Carlos Benitez dia hoy izy:
tutorial tena tsara. misaotra
Valiny tamin'i Juan Carlos Benitez
Mabel dia hoy izy:
ny fanontaniako dia hoe: mila mametraka Openshot ve ianao sa efa manana izany ny netbook?
Valiny tamin'i Mabel
Tsy maintsy apetrakao io, tsy fantatro izay fizarana izay mitondra izany amin'ny alàlan'ny default.
Heveriko fa ny Huayra / Linux dia mitondra azy amin'ny toerana misy anao.
mlpbcn dia hoy izy:
Fa programa ratsy inona, te-hametraka sary sy hira fotsiny aho dia mivoaka ilay sary rehefa tsapany fa rehefa manondrana azy aho dia tsy misy re. Izay nolazaina ratsy.
Valiny amin'ny mlpbcn
ARMIDA dia hoy izy:
TE HANAN-TSOA HANORATRA VIDEO
Valiny amin'i ARMIDA